कोरोना कहरः संकटसँगै मानवता जगाउने अवसर
सिमाना अर्याल काठमाडाैं, १६ जेठ
बदलिदो परिवेश सँगसँगै दौडिरहेका हामी बिचलित भइ पिजडाको चरी जस्तै झ्यालबाट आफ्नो वरिपरिको वातावरण चिहाइरहेको छ ।
हिजो सम्मको यो झीलिमिली शहर आज काला रातसँगै मडारिरहेका छन् । बाहिर निस्किदा एकाअर्कासँग ठोकिने हामी आज सामाजिक दुरी राख्ने खेल खेल्दै छौं ।
अनौठो छौ प्रकृति तिमी पनि मन्द मुस्कान छर्दै हामीलाई टुलुटुलु हेरिरहेका छौ । युग फेरी ढुङ्गेदिशातर्फ फर्किदै गरेको भान भइरहेको छ ।
सुस्त भन्ने शब्दले ठाउँ नपाएको हो कि भन्ने कल्पनामा डुबिरहेको छ । पाइला सुस्त हैन छिटो बग्गीको घोडाले जस्तै चलाउनुपर्ने समयसँगै चलिरहेका मानिस कहाँ हिडेको के का लागि हिडेको कुनै ठेगान छैन ।
मात्र अरुलाई उछिनेर आफु अगि बड्ने मैदान मात्र एक्लै अघि बड्ने रहर मा एकोहोरो भइरहेका छौं । केवल संसार अल्मलिएको र हामी मात्र चलायमान भएको यो अवस्था हेर्दा कतै हामीले गल्ती त गरिरहेका छैनौं?
आखिर जितेर लानु के नै रैछ र भन्ने मात्र सेकेण्डको सोच बन्यो । आर्यघाटमा मुर्दा पोलेको देख्दा आजबाट सुद्रिन्छु आखिर एकमुठी खरानी नै रहेछ यो जिन्दगी भन्जे लाग्छ । घर फर्कदा सोच परिवर्तन भई उही संसारमा फर्किने हामी मानिसमा नयाँ सोच केहिले आउला ?
माया भन्ने शब्द त आजको समयको खेलौना बनिसकेको छ किन कसलाई र कसरी गर्ने माया यी प्रश्न पटक पटक आफ्नै मनमा आइरहन्छ ।
मानिस केका लागि दैडिरहेका छन् ? गरिव, निमुखाका नाममा आफ््नै भुँडी भरिरहेका संघ संस्था देख्दा लाजले आफ्नै मुख छोप्न मन लाग्छ ।
दुख गर्ने होइन, भनसुन तथा चाकडी गरेर अघि बड्न खोज्ने संस्कृतिले मान्छेलाई नराम्ररी गाँजेको छ । दुःख गर्ने को जिन्दगी सुख आउला भन्दा भन्दै बितिरहेको हुन्छ । बाबु आमा देउता हुन् भन्दै पुज्दै आएको हाम्रो परम्परा आज लोप भैसकेको छ ।
आजको नयाँ संसार जुन विश्व नै एउटा घर जस्तै भइसकेको छ । हरेक देश र देश भित्रको घटना घरमा नै बसेर नियाल्न सक्ने समय आइसकेको छ । तर हाम्रो मानसिकता भने जस्ताको जस्तै छ ।
नकारात्मक तर्क र सोचले मानिसको कल्पना र चेतना हराउँदै जान थालेको छ ।
मानवता हराउँदै जान थालेपछि मानिस एकआपसमा डराउने दिन आइसकेको छ । यो डरलाग्दो मानवीय परिवेशमाथि यतिवेला कोरोना भाइरसले खेल्दै छ ।
जसका कारण शक्तिशाली राष्ष्« र यस्तै प्रकृतिका ठानने मान्छेलाई पनि यसले हायलकायल पारेको छ । परिवारसँग टाडिएकालाई कम्तीमा यो महामारीले एक ठाउँमा ल्याएको छ । मानवभित्र हराउँदै गएको पारिवारिक संस्कृति र सामुहिकपनलाई भाइरसले जोड्ने काम गरेको छ । यो एउटा सकारात्मक पाटो हो ।
तर चेतनाको प्रयोग सही ठाउँमा गर्ने नचाहने मानिसले यो बिषय केही दिनमै चटक्कै बिर्सने छ । यो बेला फेरि हामी मानवता र भातृत्व तथा सामुहिकताको खोजीमा भौतारिनु पर्ने छ ।
आशा गरौं, भाइरस सन्त्रासले संकट ल्याएपनि भोलिका दिनमा हराउँदै गएको परिवारवाद, सामुहिकता र भातृत्व पुनः जोडिने छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १६, २०७७, १३:४२:००
ध्यान जाओस्, राजनीति स्वार्थपूर्ति गर्न बनाइएको थलो होइन